မြန်မာ. သတင်းများ(မြန်မာသံအရာရှိ နောက်တဦး ခိုလှုံခွင့် တောင်းပြန် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြန်မာ. သတင်းများ(မြန်မာသံအရာရှိ နောက်တဦး ခိုလှုံခွင့် တောင်းပြန် )
မြန်မာ. သတင်းများ(မြန်မာသံအရာရှိ နောက်တဦး ခိုလှုံခွင့် တောင်းပြန် )
Posted by ရွှေဘိုသား on Jul 15, 2011 in Copy/Paste |3comments
ကျွန်တော် ဒီသတင်းတွေကို www.drlunswe.blogspot.com ကနေဖတ်ပြီး ဒီ MG တစ်ခုထဲပဲ
၀င်ဖတ်တဲ. ရွာသားတွေကို သိစေချင်တာကြောင်. ကူးပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ
ဖတ်ပြီးသား သိရှိပြီးသား ရွာသားတွေကိုတော. အချိန်ကုန်အောင်လုပ်မိတဲ.အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်
မြန်မာသံအရာရှိ နောက်တဦး ခိုလှုံခွင့် တောင်းပြန်
အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးမှ နောက်ထပ် သံအရာရှိတဦး ခိုလှုံခွင့်
တောင်းခံလိုက်ကြောင်း အမေရိကန်အသံ ဗီအိုအေက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ဝါရှင်တန်ရှိ မြန်မာအစိုးရသံရုံးမှ ပထမ အတွင်းဝန် ဦးစိုးအောင်သည် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနသို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် စာပို့ပြီး ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂၄ နာရီအတွင်း အစောင့်အကြပ်နှင့်အတူ ပြန်လာရန် မြန်မာအစိုးရက အင်္ဂါနေ့တွင် ဆင့်ခေါ်ခံခဲ့ရသလို၊ သူနှင့် သူ့ဇနီးသည်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များလည်း သိမ်းဆည်းခံထားသည်ဟု ဦးစိုးအောင်က VOA ကို ပြောပြထားသည်။
ဤကဲ့သို့ ပြန်ခေါ်ခြင်းမှာ ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း အမေရိကန်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးဒုတိယ အကြီးအကဲ ဦးကျော်ဝင်း ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဖြစ်ပြီး၊ အခြားသံအရာရှိ ၂ ဦးမှာ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးခံနေရပြီဟု သူက ဆိုသည်။
ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံရသည်မှာ သူနှင့် မိသားစု၏ လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်ရသောကြောင့်ဟု ဦးစိုးအောင်က VOA မြန်မာပိုင်းဌာနကို ပြောပြထားသည်ကိုပါ VOA သတင်းက ကိုးကားဖော်ပြသည်။
မြန်မာသံရုံး ဒုတိယအကြီးအကဲဖြစ်သူ သံမှူးကြီး ဦးကျော်ဝင်းသည် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင် သူ၏ တာဝန်များကို စွန့်လွှတ်ကာ အမေရိကန်တွင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် တောင်းခံခဲ့သေးသည်။
‘‘ဒီမိုကရေစီ လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲတခု ကျင်းပခဲ့တာ မှန်ပေမယ့် လက်တွေ့မှာ တပ်မတော်ကပဲ အာဏာကို အကြွင်းမဲ့ ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့အတွက် လက်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်အောက်မှာ ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲရေးကို အရိပ်အယောင်မျှ မြင်တွေ့ရခြင်း မရှိ’’ ဟု ဦးကျော်ဝင်းက RFA မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်နှင့် သီးသန့် မေးမြန်းခန်းတွင်
ဤသို့ ဦးကျော်ဝင်း နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံပြီးနောက် ၉ ရက်မြောက်နေ့တွင် နောက်ထပ် မြန်မာသံအရာရှိတဦး ထပ်မံတောင်းဆိုလာခြင်း ဖြစ်သည်။
၂ဝဝ၅ ခုနှစ်ထဲတွင် မြန်မာသံအရာရှိ ဦးအောင်လင်းထွဋ်လည်း အမေရိကန်တွင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ္မတူမြို့နယ်တွင် မြန်မာစစ်တပ်က အမျိုးသမီး ၇ ဦး နှင့် အမျိုးသား ၁ ဦးတိုို့ကို စစ်တပ်ရိက္ခာသယ်ယူရန်အတွက် အဓ္ဓမ ပေါ်တာဆွဲခေါ်ထားကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။ နမ္မတူမြို့နယ်မှ ခမရ ၃၂၄ က နမ္မတူမြို့နယ်တွင်းရှိ ဘန်ဝါရွာသား ၈ ဦးကို ဇူလှိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ နံနက် ၉ ခွဲချိန်တွင် အတင်းအဓ္ဓမခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟုဆိုသည်။ KIA_Battalion_8 နမ္မတူ အခြေစိုက် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း ၈ မှ ဇွန်လအတွင်း ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးရမိသော မြန်မာစစ်သားများကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည် အမျိုးသမီးများမှာ ဒေါ်လထော်နန်ရွယ်၊ ဒေါ်ဖာဘွန်လု၊ ဒေါ်ဖာဘွန်ကော့၊ မအင်ခွမ်ဂျီးမိုင်၊ မလထော်နူးဆန့်၊ ဒေန်နန်ခေါန်၊ ဒေါ်တန်ဘော်ရွယ်တို့ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားတစ်ဦးမှာ ဦးအင်ဒေါမာလောန်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းရွာသားများ ယခုအချိန်ထိ အိမ်ပြန်ရောက်လာခြင်း မရှိသေးကြောင်းသိရသည်။ ထို့အတူ နမ္မတူမြို့နယ် မုန်းရင်းရွာ (မိုင်းရင်း)မှ အသက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသမီး ၂၀ ကိုလည်း ခမရ ၃၂၄ က အဓ္ဓမခေါ်ဆောင်သွားရာ ယခုချိန်ထိ ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရစစ်တပ်မှ လက်နက်ကြီးများစမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုတွင် ဒေသခံများ ထိခိုက်ဒာဏ်ရာရ
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်သွားရာလမ်း ကားမှိုင်း ကထန်ကျေးရွာတွင် ဇွန်လိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ နံနက် မြန်မာစစ်တပ်လက်နက်ကြီး စမ်းသပ်ပစ်မှုနှင့် မြေမြုပ်မှိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရွာသား ၁၀ ယောက် ထိဒာဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ကထန်ကျေးရွာဒေသခံများ လယ်တောဆင်းချိန် နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင် အမြှောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ ၎င်းတို့အား မြစ်ကြီးနားဆေးရုံတွင် ထားရှိကြောင်း မြစ်ကြီးနားမြို့ခံတစ်ဦးပြောသည်။
“မြစ်ကြီးနားဆေးရုံမှာ အရေးပေါ်ခန်းမှာ ၁၁ ယောက်ပေါ့နော် ကျန်တဲ့လူတွေကိုလည်း အထူးအရိုးကုခန်းမှာ ဆေးကုသနေတယ်။ ခုဒီဟာဖြစ်ပုံက ခလရ (၂၄) ကနေ အမြှောက်ပစ်ခတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ လယ်တောထဲမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေကို ထိခိုက်ဒာဏ်ရာရရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ တစ်ခုက ဗုံးနင်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ထိခိုက်ဒာဏ်ရာရတယ်လုိ့သိရပါတယ်။”
ကားမိုင်းဒေသတွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO)နှင့် အစိုးရတပ်များကြား တင်းမာမှုမရှိသည့် နေရာဖြစ်သောကြောင့် မိမိဒေသခံများအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသွား လာလှုပ်ရှားရာနေရာများတွင် မှိုင်းမြုပ်ထားခြင်းမရှိဟု KIO တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးလာနန်ပြောဆိုသွားသည်။
“အဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်လည်း ရှေ့တန်းမှာရှိ နေသလောက်ရဲဘော်တွေကို စုံစမ်းပြီးပြီ အဲဒီဒေသမှာ အဲဒီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေ အဲမှာမရောက်ဘူး ဒါကြောင့်မို့ ဖြစ်သွားတဲ့မှိုင်းကွဲမှုမှာ ကျွန်တော်တို့ KIOနဲ့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိဘူး ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ လူထုကို ထိခိုက်စေမဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုး တစ်ခုမှမလုပ်ပါဘူး။ လုပ်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး။ အဲဒီဘက်မှာ KIA ရှေ့တန်းစခန်းတွေမရှိပါဘူး။ အဲမှာအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့ နယ်မြေစိုးမိုးရေးအနေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်တွေအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ နယ်မြေတွေပါ။”
သို့သော် ၄င်းဖြစ်စဉ်တွင် ကထန်ဒေသခံ ထိခိုက်ဒာဏ်ရာရသောသူများအား ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ ၀န်ကြီးအဖွဲ့မှ တခြားအဖွဲ့များမှ အကူညီမယူရန် လာရောက်ကြည့်ရှု၍ ဆေးကုသစာရိတ်များ တာဝန်ယူပေးခဲ့ကြောင်း ဒေသခံပြောသည်။
“စစချင်းဖြစ်တဲ့နေ့ မြစ်ကြီးနားဆေးရုံမှာ သက်ဆိုင်ရာ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ ၀န်ကြီးအဖွဲ့က လာရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်။ သူတို့အားလုံးအစိုးရတာဝန်ယူပြီးမှကြည့်ရှုပေးမယ် တခြားမည်သူမည်ဝါရဲ့အကူအညီမှမယူနဲ့။ ခွင့်ပြုချက်မပေးဘူးလို့ ပြောတာပေါ့။ အဓိက သူတို့အစိုးရပဲတာဝန်ယူပြီးမှ ကုသပေးတာပေါ့။ တခြားကတော့ ဆွေမျိုးမိသားစုတွေပဲ လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အဆင့်ပဲ ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။”
ယမန့်ည ၇ နာရီခန့်တွင်လည်း မြစ်ကြီးနား ဧရာဝတီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်း ၀ိုင်းမော်မြို့ မုတ်ကြိတ်ကျေးရွာ ကွန်ကရစ်တံတား တစ်ကြိမ်ပေါက်ကွဲ၍ ဒီဂျီတယ်လ် တယ်လီကွမ်ဆက်သွယ်ရေးဓါတ်တိုင်တွင် နံနက်၂နာရီခန့်တွင် တစ်ကြိမ် ၂ ကြိမ်ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်တပ်မှ ကားမိုင်းဒေသတွင်း လက်နက်ကြီးများ စမ်းသပ်ပစ်ဖောက်ခြင်း မြေမြုပ်မှိုင်း ပေါက်ကွဲခြင်းများလည်းဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့် ဒေသခံများသည် ယခုဖောက်ခွဲမှုသည်လည်း အစိုးရစစ်တပ်များဖြစ်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြသည်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)နှင့် မြန်မာအစိုးရတပ်ကြား တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ အစိုးရစစ်တပ်မှ စစ်အင်အားလက်နက်များသည် ကချင်ပြည်နယ်တ၀ိုက်တိုးချဲ့လာခြင်းအပေါ် ဟန့်တားသည့်အနေဖြင့် KIA တပ်များ လမ်းတံတား ၂၀စင်းအထက်ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ယခုအချိန်တွင် KIOသည် ယာယီအပစ်ရပ်ရေးပြုလုပ်ရန် မြန်မာအစိုးရအား ဇွန်လိုင်လ ၈ နေ့၌ ပြောဆိုထားသော်လည်း အစိုးဖက်မှတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးသည့်အပြင် ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင် ပစ်ခတ်မှုဆက်လက်ရှိနေကြောင်း KIO အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးလာနန်ပြောသည်။
ကချင်ရွာသား ၁၂ ဦးကို နှိပ်စက်တဲ့ ရဲတွေ အတိုင်ခံရ
လမ်းပြင်နေသည့် ကချင်ရွာသား ၁၂ ဦးကို သူပုန်ဟု စွပ်စွဲကာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သော ရဲ ၂ ဦးကို အရေးယူရန် တိုင်ချက်ဖွင့်ထားသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ပူတာအိုခရိုင် နောင်မွန်း-မချမ်းဘောလမ်း ပြုပြင်နေသည့် ရွာသားများကို ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ဝင်များဟု စွပ်စွဲပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ရွာသားများဘက်မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ခရစ်ယာန်သင်းအုပ် ဆရာတော် ဦးနော်ဒင်းက ပြောသည်။
ဇွန်လ၂၁ ရက်နေ့က နောင်မွန်းမြို့မှ ၁ဝ မိုင်အကွာရှိ မကွေဇာနှင့် ဒဇယ်ထုကျေးရွာအကြား ကားလမ်း ပြုပြင်နေသည့် ဦးချမ်းဒီးရမ် ဦးဆောင်သည့် ဒေသခံ ၁၂ ဦးတို့ နေ့လည် ထမင်းစား နားနေချိန်တွင် ခေါင်လန်ဖူး ရဲစခန်းမှူး ဒုရဲအုပ် သောင်းထွန်းမော်၊ တပ်သား အောင်တိုးတို့မှ “ကချင်မှန်သမျှ KIA သူပုန်ဖြစ်သည်”ဟု ပြောကာ ရိုက်နှက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ယင်းရွာသားများက ပူတာအိုခရိုင် ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားထားသည်။
အထက်ပါ ဒေသခံများမှာ ရပ်ဘော့ရွာ၊ ဂတ်ထုရွာ၊ ဒန်ဆယ်ထုရွာနှင့် နောင်မွန်းမြို့တို့မှ ရွာသားများဖြစ်ပြီး ယင်းတို့ကို သေနတ်ဖြင့် ဦးခေါင်းကို ရိုက်နက်သည့်အပြင် ၂ နာရီခန့်ကြာ ဒူးထောက်ခိုင်းခဲ့သည်ဟု တိုင်တန်းချက်တွင် ပါရှိသည်။
ရဲ ၅ ယောက် ရောက်လာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သော်လည်း နှိပ်စက်မှုပြုခဲ့သူများကိုသာ ရွာသားများက ရွေးထုတ် တိုင်ကြားခြင်း
ရိုက်နှက်ခံရသည့်နေ့ ဇွန် ၂၁ ရက်နေ့တွင်ပင် နောင်မွန်းခရိုင်တရားရုံးသို့ တိုင်တန်းခဲ့သော်လည်း တရားရုံးက ရဲအရေး မပိုင်သည့်အမှု ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ လက်မခံခဲ့သလို၊ နောင်မွန် ရဲမှူးကလည်း အမှုတိုင်ကြားခြင်း မပြုရန်နှင့် တယောက်လျှင် ကျပ် ၅ သိန်းဆီဖြင့် ကျေအေးရန် ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သင်းအုပ်ဆရာတော် ဦးနော်ဒင်းက ပြောသည်။ ထို့ကြောင့် ပူတာအိုခရိုင် ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားရခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း သူက ဆိုသည်။
ပူတာအိုခရိုင် ရဲစခန်းသို့ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့သော်လည်း ရဲမှူး ဦးမော်ထွန်းမှ ယနေ့ထိ ပြန်လည် အကြောင်းကြားလာခြင်း မရှိသေးသလို၊ နောက်ထပ် ၁ဝ ရက်ခန့်ကြာ အချိန်စောင့်ပြီး အမှုကိုင်တွယ်ပေးခြင်း မရှိပါက နေပြည်တော်အဆင့်ထိ တိုင်ကြားရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ဦးနော်ဒင်းက ဆက်ပြောသည်။
ထိုဒေသခံ ရွာသားများမှ ဆက်လက် တိုင်ကြားရန် ဆန္ဒရှိပါက နေပြည်တော် သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်-ILO ထိ တိုင်ကြားရန် စီစဉ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းကစ္စအား လိုက်ပါ ကူညီပေးနေသူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု NDF မှ ကချင်ပြည်နယ် အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ပြောသည်။
သို့သော် ရွာသားများအနေဖြင့် ပူတာအိုမှ ရန်ကုန်မြို့သို့ လာရောက်ရန် လမ်းစရိတ် အနည်းဆုံး ကျပ် ၃ သိန်းခန့် ကုန်ကျမည် ဖြစ်သောကြောင့် ရန်ကုန်သို့ သွားရောက်တိုင်တန်းရန်မှာ အတားအဆီးဖြစ်နေသည်။
ထိုစဉ်တွင် ဧည့်စာရင်းပိတ်ခံရသော ရန်ကုန်တိုင်း သံလျင်မြို့နယ် ဗိုလ်ချုပ်ရွာတွင် အိမ်ငှားနေသော ကချင်ကျောင်းသားများကို ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်နေပြီး နေရပ်ရင်းမှ ထောက်ခံစာယူရန်
ပြောဆိုထားသည်ဟု ယင်းကိစ္စကို အကျိုးဆောင်ပေးခဲ့သူ ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ပြောသည်။
သို့သော်လည်း ကျောင်းသားများမှာ ခရီးလမ်းဝေးကွာလွန်းမှုနှင့် စားစရိတ်ကြောင့် ကြန့်ကြာမှုများ ရှိနေသည်။
တက်ခါစအစိုးရသစ်ပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုတွေ လျောါပါးလာတာကို..လာလှည့်ပါကြည်လှည့်ပါလို့မဖိတ်မခေါ်ရဘဲ….ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ပြနေသလိုဖြစ်နေရပါပြီ။ ခုလို နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တွေ တောင်းလာကြရတာက သက်ဆိုင်သူတွေရဲ့ မိသားစုလုံခြုံရေးကိုထိပါးလာလို့ပါဘဲ။ ဌာနတွင်းမှာ အမြစ်ကလှန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဆက်တိုက်လုပ်လာတဲ့ ဂယက်က ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပကိုပါရိုက်ခတ်လာနေပါပြီ။ လက်ရှိအာဏာရလာတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တေါဟာ မိမိတို့ရဲ့ အာဏာ ကိုခုချိန်မှာ consolidate ချုတ်ကိုလွှမ်းမိုးလာနိုင်အောင် သူ့ထက်ငါ အပြေးအလွှားလုပ်လာနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပြုပြင်ရေးဘက်မရောက်ဘဲ အပျက်ဘက်ကိုစောစောစီးစီးခြေလှမ်းလာတဲ့ လက္ခဏာတွေပါ။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို ခိုလုံခွင့်ပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲနော်
အော် ခုမှ ဘဲအမြင်မှန်ရလာကြတာကိုး။အရှက်မရှိတဲ့ လူတွေများနော် ဘယ်ထိဆက်မိုက်နေဦးမလဲမသိပါဘူး။တိုင်းပြည်တော့ မွဲပြီးရင်းမွဲ. ဖာနိုင်ငံဖြစ်တော့မယ်။ အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်း နေသလို ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား ကိုယ်ပြန်သတ်နေတဲ့ နိုင် ငံကမ္ဘာမှာ မြန်မာရယ်လို့ ကြွေးကြော်ရတော့မှာပါ